Author: Voodoogis Mezijind
Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa 1 Musharraxa Madaxweynenimada ama ku-Xigeenka Madaxweynaha waxaa soo jeedin karaa xisbiyada siyaasadeed ama wuxuu noqon karaa Musharrax madax-bannaan. Islaamku waa Diinta Dowladda. Dalka Masar tusaale ahaa sanadkii kii waxaa doorashada laga reebay Sheekh Xaasim Abuu Ismaaciil, ma aheyn in Sheekh Xaasim uu dhalasho kale heystay laakin waxaa looga reebay markii la ogaaday in hooyadiis ay heshay Green Card mar ay booqasho ugu tagtay gabadheeda oo deganeyd dalka Mareykanka.
Gobannimada Jamhuuriyadda soomaaliya waxay koobeysaa dhulka Jamhuuriyadda oo idil, oo ay ku jiraan berriga, jasiiradaha, biyaha goboleed, ururkooda, hawadooda iyo geyi-qaaradeedka. Sabtidii waxaa la soo xiray kalfadhigii 7-aad ee baarlamaanka federaalka, waxaa la sheegay in la dhameystirayo cutubyada dhiman sida 5, 6, 7, 8 iyo naad, kadibna guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka ay aadi doonaan gobollada dalka iyadoo ay ku wehlinayaan xildhibaanada gobolkaas ka soo jeeda si shacabka loogala tashado arrimaha dib u eegista dastuurka kadibna waxaa dastuurka lagu soo celin doonaa baarlamaanka si qodob walba xildhibaan u ansixiyaan.
Qodob kale oo Warar ah. Qodobka 96aad-Doorashada Madaxweynaha iyo Madxweyne Ku- Xigeenka 1 Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaa si toos ah u dastuurla doono dadweynaha.
Waxaana diintan Rastafari dadka rumaysan ay qabaan in boqortooyadii Itoobiya ee uu ef dambeeyay Xeyle Salaase ay kasoo bilaabatay boqor Nabi Sulaymaan calayhi salaam, oo ay u yaqaanaan inuu yahay Cusyb. Qodobka 4aad — Gobannimada Jamhuuriyadda 1. Qodobka 8aad — Magaalo Madaxda Qaranka 1. Gabadha qortay dastuurka Soomaaliya waxay rumaysan tahay dhaqdhaqaaqa diiniga ah ee la yiraahdo Rastafari.
Soomaalidu horay ugu maahmaahday “Hal booli ahi, nirig xalaal ah ma dhasho” Hadaba yaa dhalay dastuurka qabyo-qoraalka ah? Cutubka 9aad Laanta Fulinta ee Federaalka. Image caption Dadka taageersan dastuurka cusub Berito oo arbaca ah, taariikhduna tahay afarta bisha Agoosto, Dalka Kenya waxaa looga dareeri doono afti loo qaadayo dastuur cusub, oo ay ku kala qeybsameen siyaasiyiinta iyo hoggaamiyaasha madhabta masiixiga ee diinta masiixiga.
Diintaas ayay aaminsan yihiin gabadha iyo ninkeeda ee qoray Dastkurka Soomaaliya.
Qabyo-Qoraalka Dastuurka Cusub ee Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxa Qaranka iyo xukuumadda, waana astaanta midnimada Qaranka. Burundi opposes AU calls to withdraw troops in Somalia December 24, More foreign airlines to launch flights to Somalia amid improved security: Gaashaanka dushiisa waxaa ku yaal rurkumo carbeed oo xardhan, lehna shan madax oo dahabi ah oo labada geesba ku yaalliin ay kala qaaran yihiin. Waxaa loo dooran karaa xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda muwaaddin kastoo Soomaaliyeed, Muslim ah, aabihiis iyo hooyadiis Soomaali asal ah yihiin, horay an u gursan, inta uu xilka hayana guursanin qof aan Soomaali asal ahayn.
Dhinaca kale, iyadoo doodaas ay ka bilaabatay gudaha Soomaaliya ayaan baaritaan ku sameynay haddii uu jiro dunidan dal ogolaanaya in uu madaxweyne ka noqdo ruux labo dhalasho isku wata, natiijada waxaa ay noqotay in caalamka laga diiday ruux labo baasaboor leh in uu dal hogaamiyo. Calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, sida lagu muujiyay qaybta A ee jadwalka koowaad, waalaydi buluug furan ah oo dhexda kaga taal xiddig cad oo shangees ah, madaxyo simanna leh.
Dadka rumaysan diinta Rastafari waxay aaminsan yihiin Xeyle Salaase inuu abuuri doono aduun cusub si uu wanaaga ugu hogaamiyo aduunka, waxayna u yaqaanaan aduunkaas Zion, caasimadda Zion waxay ku sheegeen inay ku taalo waqooyiga Itoobiya halka la yiraahdo Lalibela, waxayna ugu magac dareen Jurisalaamta Cusub.
Abril waxa qaba qareen kale oo Itoobiyaan ah, waxaana loo xilsaaray labadooda inay soo diyaariyaan dastuurka Soomaaliya ee ay kusoo qoreen, in guurka aan loo aqoonsan kaliya midka dhex mara nin iyo naag Dadka aaminsan diintan waxay qabaan in boqorkii Itoobiya Xeyle Salaase uu yahay “Ilaaha kaliya” ee mudan in la caabudo.
Maxaa tiri, Maay tiri iyo Carabi sida ku cad jadwalka. Shir ku saabsan dastuurka cusub ee Soomaaliya oo soo idlaaday iyada oo uu madaxweynuhu ballan qaaday in la dardar gelin doono hannaanka dib-u-eegista.
Email or Phone Password Forgot account? Guddiga ku meel gaarka ee doorashada ayaa sheegaya in uu diiwaangeliyey in ka badan 12 milyan oo qof iyadoo codka laga dhiiban doono in ka badan 27 kun oo goobood, Ammaanka ayaa aad loo adkeeyeycabsi laga qabo in si la mid ah dii ay rabshado ka dhacaan dalka. In la badalo dastuurka, waxay qeyb ka mid ahayd heshiis ay beesha caalamka taageertay, oo lagu soo afjaray rabshado uu dhiig badan ku daatay, oo ka dhashay doorasho natiijadeeda la isku khilaafay laba sanno ka hor.
Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay. Hareeraha waxaa ka haya laba shabeel oo isu tusmaysan, kuna kala taagan labo waran oo isku weydaarsan caaradda hoose ee gaashaanka, ayna weheliyaan laba caleen-cawbaar, diillin cadna ay ku qoofalan tahay. Qodobka 2aad — Dowladda iyo Diinta 1. Cutubka 3aad Xuquuqda Aas-aasiga ah.